Nairobi, Hargeysa Iyo Muqdishada loo soo hayaamayo. – KHAATUMO NEWS
Nairobi, Hargeysa Iyo Muqdishada loo soo hayaamayo.
Isbadeladda waaweyn ee Soomaaliya, ka jira waa kuwo isa soo taraya, mana ah mid ku yimi habeen iyo maalin waase arrin ku timi dadaalo badan oo bulshada Soomaaliyeed aad uga soo wada shaqeeyeen, waxaana jirta in aanay bulshada Soomaaliyeed oo kaliya ka shaqayn ee lagala shaqeeyey sidii ay mar kale lugahooda isugu taagi lahaayeen.
Waxaan xasuustaa intaan Shirkii Carta la qaban ayaa sadex madaxweyne ku kulmeen Sanca, waxay dhiiri galin u ahaayeen sidii Soomaali shir loogu qaban lahaa markan kuwii hore ka duwan, ilaahayna Ismaaciil Cumar Geele waa ku guuleeyey in shirkaasi qabsoomo, waxaana ka dhashay xukuumad, taas oo sidii marba laysugu dhiibayey soo gaadhay xukuumadda maanta talada dalka haysa aadba haysu ammaantee.
Natiijada maanta muuqata waxaa ka mid ah.
In dawladaha xubinta joogtada ka ah golaha ammaanku Safaaradahooda ka furanayaan Muqdisho Xalane ha noqotee ayna ugu danbaysay Safaaradda Maraykanka oo mar kale laga Furay Muqdisho.
In dhammaan Hay’adihii Ajnabiga ahaa ee Madaxdoodu Nairobi iyo Hargeysa joogeen lagu amrayo in ay Muqdisho degaan, xogtan ah in hay’aduhu Hargeysa ka soo guuraan oo ay Muqdisho soo degaan iyaga iyo madaxdooduba waxaa sidaas sheegay ilo xog-ogaal ah.
Sida kale marka loo eego rajadii la qabay 2000 markii Carta xukuumadda lagu soo dhisay iyo maanta halka la joogo aad ayey u kala duwan tahay, xilligaas rajadu aad ayey u saraysay lamana filayn in 2019 xukuumadda Soomaaliyeed in aanay Caasimaddii dalka amnigeeda sugi karin, gobolada dalka aanay xukumin, xuduudihii dalkana gacanta ku hayn, waxaase muuqata in dhaawaca dalka iyo dadka gaadhay uu yahay mid aad u qoto dheer oo u baahan dadaal dheer ah iyo talo badan, madaxda dalka hadda joogtana looga baahan yahay in ay talada badiyaan oo ay badelaan okiyaalaha ay la bisan yihiin ,waxa la hubaa ee ay xukunka sii joogaanba sanad ma dhama.
Waxaase muuqata in Nairobi iyo Hargeysa hay’aduhu ka soo gurmayaan, Muqdishana u soo hayaameen taasina waa talaabo muhiim ah iyo sida muuqata oo ah in xukuumadani cadaadis saartay sidii ay ugu soo guuri lahaayeen Muqdisho.
Sidaas oo ay tahay ayaanay Muqdisho dhexdeeda si caadiya ugu noolaan karin ee ay Xalane isku Buurteen.
Previous Post: Deg Deg Daawo:Xildhibaan Dhakool Oo Ka Hadlay Xaalada Kismaayo iyo Xubnaha Somaliland Dirayso
Next Post: Deg Deg Daawo:Wariye Cabdisalaan Hereri Oo Daad Qaatay,